Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: Ny Fiafaran’ny Anganongano HSBC · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Febroary 2018 8:31 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Nitsoraka 24% hatramin'ny 33 $HK, haavo ambany indrindra hatramin'ny 1995, ny maripanondroana ny HSBC Holding, ilay banky lehibe indrindra any Eoropa, sady ‘elefanta”-n'ny Hang Seng any Hong Kong, omaly (9 Martsa). Hatramin'ny nanombohan'ny krizy ara-bola, dia maro ny olona ao Hong Kong no mihevitra fa tsy ho tratran'ny tsunami mivantana ( ampahany noho ny ataon'ny shinoa) ilay tanàndehibe. Na izany aza, satria noheverina fa fototry ny toekaren'i Hong Kong ny HSBC, ny fitsorahana ho any amin'ny 33$HK dia tena kapoka mafy amin'ny fahatokisan'ny olona (tompona petrabola).
Tsy nahatazona ny ranomasony tsy hilatsaka ilay mpilaza vaovao ara-toekarena aminà fahitalavitra mandeha amin'ny hosona rehefa nidina hatrany amin'ny 33$HK ny vidy nandritra ny fotoanan'ny lavanty tamin'ny minitra farany nialoha ny nikatonan'ny tsena. Niely be tamin'ny YouTube ilay lahatsary  ary lasa lohahevitra mafàna amin'izao fotoana izao
Those Were the days dia nitoraka bilaogy ny resaka maromaro tamin'ny finday momba ny HSBC
Nahazo antso avy tany amin'ny A aho ny maraina, nolazainy fa ambany be ny vidin'ny petrabolan'ny HSBC, nefa mbola mijanona ho HK$38. Efa very sahady ny ampahatelon'ny fampiasambolany ao amin'ny HSBC amin'io haavo io, raha mbola milatsaka io, dia tsy azony antoka intsony ny fanànany ny zony .
Rehefa nitsoraka ho 33$HK ny HSBC :
Nambaran'i B fa tsy olana manokan'ny orinasa ny fidinana ho amin'ny haavo tahaka io. Resaka fitokisan'ny vahoakan'i Hong Kong io. Amin'ny ankapobeny, mino ny vahoakan'i Hong Kong fa na ho rava aza izao tontolo izao, dia tsy hianjera ny HSBC. Izany no antony, tato anatin'ny volana vitsivitsy, isaky ny ao misedra zava-tsarotra ny HSBC, dia tsy maintsy mividy petrabola ao ireo mpanana petrabola mba hitazonana ny petrabolany tsy hitontongana. Mifandray ny HSBC sy ny fiainan'ny mpanana petrabola tsirairay.
Fakàna aina kely niaraka tamin'i C. Very niaraka tamin'ny vidin'ny petrabola ho 33$HK ny roa ampahatelon'ny fampiasàmbolany, fa mbola nanantena handray ny zony izy. Nefa, mianatra any Angletera sy any Kanadà ny zanany anankiroa ary efa niomana ny hisotro ronono izy afaka 8 na 10 taona, ary hivelona amin'ny tombony azo avy amin'ny HSBC sy ny Banky Hang Sang. Ankehitriny, foana ny fanantenany ary tsy maintsy atrehany ny olana ara-bola noho ny resaka momba ny zo. Nanapaka hevitra ny hampihena ny fandaniany izy, isan'izany ny diany amin'ny fialantsasatry ny Paska.
Avy eo, tonga ny antso iray saro-takarina tamin'ny finday. Mino izy fa fotoana fohy taorian'ny nandravan'ny governemanta ny fefilohan'ny star ferry, dia mbola nitohy nitontongana ny vidin'ny petrabolan'ny HSBC. Mazava be fa ny fefilohan'ny Star Ferry no namotika ny fengshui-n'ny HSBC. Ho an'ny tombontsoan'i Hong Kong sy ireo mpanana petrabola, dia nangatahany ny governemanta mba hamerina hanangana ny star ferry ao amin'ny toerany voalohany…
Tsy nisy fiantraikany tamin'i Mimi ny krizy saingy nanamafy izy fa tokony handinika ny fampianaran'i Bouddha ny vahoakan'i Hong Kong :
Nandritra ny am-polo taona vitsivitsy, dia notombanan'ny vahoakan'i Hong Kong ho tahaka ny vola azo ampiasaina ny petrabolan'ny HSBC sady nanome antoka ny fiverenan'ny zanabola midangana. Miorina tsara sy azo antoka. Omaly, nidina ho amina'ny 33$HK ilay izy, tsy mahagaga raha latsa-dranomaso nanoloana ny fakàntsary ilay mpanao famakafakàna momba ny petrabola ary nalahelo noho ilay fahavoazana ny nosy iray manontolo. Efa namidiko daholo ny HSBC-ko ary efa ela aho no nahazo tombony kely. Amin'izao fotoana izao, dia petrabola tsy misy dikany no eo an-tànako fa tsy mampaninona ahy izany. Azoko avela ho an'ny zanako lahy izany. Na izany aza, maro ireo mponina any Hong Kong no nandray soa tamin'ny fampiasàmbolan'ny ray aman-dreniny tao amin'ny HSBC, arakaraky ny ilàny azy amin'ny saram-pianarana sy fandaniana andavanandro.
Taloha, rehefa sendra nifanena tamin'ireny namana ireny aho, dia nidera azy fa tsara vintana izy, nefa manontany tena ihany koa aho raha toa ka izany no fomba fiaina. Ankehitriny, misaina ny momba io fanontaniana io aho ary mahatsapa fa io tsunami io no fanamby ho an'ny olona mahomby. Taloha, nihevitra isika fa mahalala, ary ninoantsika ireo olona sasany, ny fitsipika ary ny rafitra. Fa amin'izao krizy izao, dia hitantsika fa tsy mahalala isika ary tsy misy azontsika hitokiana ihany koa. Hitondra inona daholo izany zavatra rehetra izany ? Tsy te-handresy lahatra na iza na iza aho, fa milaza aho fa izao tontolo izao no te-hampahafantatra antsika :
Nofy daholo, zavatra manjavozavo, tapoakan-tsavony, dindo,
ranonando na tselatra iray fomba iray, izay làlana tokony ho raisin'ny lehilahy mahira-tsaina. ( nadika avy tamin'ny zftrans  )
Ny 10 Martsa 2009, niakatra ho 38$HK teo ho eo ny vidin'ny petrabolan'ny HSBC ary mandinika ny minitra faran'ny varotra ny Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Komitin'ny Fiarovana sy ny Hoavy, alohan'ny hikatonan'ny tsena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/26/114370/
 nanamafy izy fa tokony handinika ny fampianaran'i Bouddha ny vahoakan'i Hong Kong: http://kkcwmimi.spaces.live.com/blog/cns!272E352817207B7!4781.entry